टिकटक का*ण्ड: दिल्ली गाजिया बादबाट आयो सिम्रनको फोन अनि फेरी स्विच अफ, कस्तो अवस्थामा छिन ? (भिडियो) « Np Online TV
टिकटक का*ण्ड: दिल्ली गाजिया बादबाट आयो सिम्रनको फोन अनि फेरी स्विच अफ, कस्तो अवस्थामा छिन ? (भिडियो)
भारतको कानपुरमा बस्दै आएको नबिनको परिवार श्रीमती सिमरनकै कारण भारतमा बस्न नसक्ने अवस्था भए पछी नेपाल आएर चितवनमा होटेल चलाउँदै आएका थिए। चितवनमा भाईरल भईरहेको अर्को काण्ड सन्तोष र प्रमिला सुनारको घ’ट’नाले सामाजिक संजाल तातिरहेको अवस्थामा एक व्यक्तिले रुँदै मेरो श्रीमती हराई रहेकी छिन खोजिदिन पर्यो भने पछी यो घ’टना बाहिर आएको थियो।
परिवारको कुरा सुन्दा भारतमा अन्य केटाहरु संग लागेको र संधै फोनमा मात्र ब्यस्त रहने सिम्रन भारतमा पनि अर्कै एक जना भारतिए संग सम्बन्धमा रहेकी थिईन। उनको ससुराको अनुसार भारतमा छर छिमेकीमा बस्न नसक्ने अवस्था भएपछी नेपाल पठाईएको थियो। भारतमा रहंदा एक जना युवाले ना”ङ्गो फोटो देखाएर सिम्रनलाई ब्ल्या’क मेल गरिरहेका थिए भने त्यसको बदला २ वटा औठी बेचेर उक्त केटालाई दिएको पनि ससुराले खुलाएका थिए। छोरीलाई जसरि ब्यावहार गरेर राखेको सिम्रनलाई माया नापचेरा घर छोडेर गएको भनेर नाबिनको बुवाले दुख पोखेका थिए। १३ गते घरमा सामान्य घर झ’गडा हुँदा दिनको ३ बजे तिर उनि भरतपुर७ स्थित जेठानीको घर बाट निस्किएर हिंडेकी थिईन। मिडियामा यो बिषयले धेरैनै ठाउँ पाए पछी अन्तत सिम्रनले हिजो बेलुका आफु दिल्लीमा रहेको कुरा फोन गरेर बताएको खुल्न आएको छ। भिडियो :